Ekugcineni badalula i-trailer ekhangayo ye-Star Wars: I-Jedi Yokugcina | Izindaba zamagajethi
Ekugcineni baveza i-trailer ekhangayo ye-Star Wars: i-Jedi Yokugcina
Isitolimende sesishiyagalombili sesinye se-sagas esibaluleke kakhulu emlandweni we-cinema silungile, Izokwethulwa kuwo wonke amatiyetha emhlabeni wonke ngoDisemba 15 futhi siqinisekile ngokuphelele ukuthi awufuni ukukugeja. Kodwa-ke, lokhu akuyona into emangalisa kakhulu ngale trailer entsha, kepha umqondisi wayo, uRian Johnson, uncoma ukuthi ungayiboni.
Kepha uzobekezelela kanjani isifiso sakho sokuyibona? Sonke sifuna ukwazi ukuthi le ndaba iqhubeka kanjani nokuthi uhlangothi olumnyama lombutho luqhubeka nokuba namandla kangakanani. Ngakho-ke ungaphuthelwa, ngemuva kokugxuma une-trailer ephelele.
I-trailer ekhangayo isivele inezivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyisikhombisa ku-akhawunti ye-YouTube esemthethweni, ukwenza kucace ukuthi ifilimu izophumelela kangakanani. Yethulwe eMinnesota ngesikhathi somdlalo wamaViking owawubhekene neChicago Bears, ukuthi abaseNyakatho Melika bawuthanda kanjani umbukwane omsulwa. Kuyi-trailer yesibili ngemuva kwaleyo esiyibonile ngo-Ephreli eyasishiya singaziwa kakhulu futhi ekugcineni uRey wahlangana noLuka Skywalker okhule kakhulu emhlabeni u-Ahch-To, okumangazayo ukusho okuncane, kepha akungabazeki ukuthi uRey uyiqiniso I-Jedi.
Imizuzu engaphezu kwemibili yemizwelo le ngcezu ye-trailer ihlala kuyo, futhi uqaphele, ngoba kukhona amazwibela weLeia edlalwa nguCarrie Fisher ongasekho. Kubukeka sengathi isu lokumaketha lizofana nesitolimende esedlule, futhi asikungabazi ukuthi usuvele ubala izinyanga ezimbili nezinsuku ezinhlanu ezisele ukuthenga ithikithi lakho uye ebhayisikobho oyithandayo. Ku-Actualidad Gadget sizokugcina unolwazi ngokushesha mayelana nayo yonke indawo ye-Star Wars.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ekugcineni baveza i-trailer ekhangayo ye-Star Wars: i-Jedi Yokugcina
Sivivinye i-Koogeek blood pressure monitor ehambisana ne-Android ne-iOS
I-Apple iqala ukuphenya ukuthi kungani amabhethri e-iPhone 8 ethile evuvukala